Unqulo & Umoya Ukuphila Ngokholo LobuKristu
Iimyalelo zeMonastic ngamaqela amadoda okanye amabhinqa azinikezela kuThixo kwaye ahlala kwindawo ekude okanye yodwa. Ngokuqhelekileyo, iidonks kunye neendoda ezihamba ngeendlela eziqhelekileyo zenza impilo yokuphila, iingubo zokugqoka okanye izambatho, ukutya ukutya okulula, ukuthandaza nokucamngca amaxesha amaninzi ngemini, nokuthatha izibhambathiso zokungabikho kobuhlwempu, nokuthobela.
Iimonki zihlukaniswe zibe zimbini iindidi, i-eremitic, ezizimeleyo kunye ne-cenobitic, ezihlala kunye kunye noluntu.
Ngekhulu lesithathu neyesine leminyaka laseYiputa, iintlobo zentlobo ezimbini: i-anchorites, eya kwintlango kwaye yahlala kwindawo enye, kunye neengcingo ezazihlala zodwa kodwa zihamba.
I-Hermits yayiza kubuthana kunye nomthandazo, ekugqibeleni kwakhokelela ekusekeni kweendwendwe zamatye, indawo apho iinqununu zazihlala ndawonye. Omnye wemithetho yokuqala, okanye isethi yemiyalelo yee-monks, yabhalwa nguAgasine waseHippo (AD 354-430), umbhishophu webandla lokuqala eNtshona Afrika.
Eminye imigaqo elandelwayo, ebhalwe nguBasil waseKesareya (330-379), uBenedict wase-Nursia (480-543) kunye noFrancis wase-Assisi (1181-1226). I-Basil ithathwa njengumseli we- Orthodox yaseMpuma ye- Eastern , uBenedict umseli wesonto lonxweme .
I-monasteri isoloko ine-abbot, ukusuka kwi-Aramaic igama elithi " abba ," okanye uyise, ngubani umholi wenkolo yombutho; phambili, ngubani wesibini kumyalelo; kunye nabanqwenela, ngubani ngamnye ojongene neentloko ezilishumi.
Oku kulandelwayo yiyona mithetho eyingqungquthela yamakhosi, nganye leyo inokuthi ibe nemiyalelo emininzi:
Eyilwe ngo-1244, lo myalelo ulandela uMthetho ka-Augustine. UMartin Luther wayengumAgasti kodwa wayenomdla, kungekhona umonki. Iintlambo zinemisebenzi yokubusa kwihlabathi langaphandle; iidonki zixutywe kwiindwendwe.
Abase-Augustini bembethe izambatho ezimnyama, bafanekisela ukufa kwihlabathi, kwaye baquka amadoda namabhinqa (indoda).
Eyasungulwa ngo-356, aba oonondlo kunye namadada balandela uMthetho weBasil Omkhulu. Lo myalelo ngowona-ntla ye- Eastern Orthodox . Amanxila asebenza ezikolweni, kwizibhedlele, kunye nemibutho yokunceda.
UBenedict wasungula i-abbey ye-Monte Cassino e-Itali malunga ne-540, nangona ngokobuchwepheshe akazange aqale umyalelo ohlukile. Iimonasteri emva kolawulo lweBenedictine lwasasazeka eNgilani, ininzi yeYurophu, ngoko yafika eMntla naseMzantsi Melika. AmaBenedictines aquka amaninzi. Umyalelo ubandakanyeka kwimfundo nakumsebenzi wezithunywa zevangeli .
Eyasungulwa ngo-1247, amaKarmele aquka ama-friars, izindwendwe kunye nabantu. Ba landela ulawulo luka-Albert Avogadro, olubandakanya ubuhlwempu, ubumsulwa, ukuthobela, umsebenzi wezandla, kunye nokuthula ngenxa yemini. AmaKarmele enza ukucamngca nokucamngca. AmaKarmele aKhe aquka i-mystic John of the Cross, uTeresa waseAvila, kunye noThese of Lisieux.
Umyalelo wesiseko esisekwe ngo-1084, eli qela liqukethe izindlu ezingama-24 kumazwekazi amathathu, azinikele ekucingeni. Ngaphandle kobunzima bemihla ngemihla kunye nesidlo seSonto, ixesha elininzi lichitha ixesha labo kwigumbi (iseli). Ukutyelela kuncinci kwintsapho okanye kwiintsapho kanye okanye kabini ngonyaka.
Indlu nganye ixhasayo, kodwa ukuthengiswa kwe-liqueur eluhlaza elinezityalo ezibizwa ngokuthi yiChartreuse, eyenziwa eFransi, inceda ukuxhasa imali.
Eyasungulwa nguBernard waseClairvaux (1090-1153), lo myalelo unamasebe amabini, iiCistercians ze-Common Observance kunye noCistercians we-Strict Observance (Trappist). Ekulandeleni umgaqo weBenedict, izindlu eziqinileyo zokuzigcina ziyeka inyama kwaye zithathe isifungo sokuthula. Iiminyaka ezi-20 zee-Trappist monks, uThomas Merton noTomas Keating, babekho uxanduva lokubuyiselwa komthandazo phakathi kwabantu baseKatolika.
Le "Myalelo Wabavakalisi" wamaKatolika owasekwa yiDominic malunga ne-1206 ilandela ulawulo luka-Augustine. Amalungu ahlambulukileyo ahlala kunye kunye nezifungo zentlupheko, ubumsulwa kunye nokuthobela. Abasetyhini bangaphila kwiindawo zeendwendwe njengeendwendwe okanye ngaba noodade abapostile abasebenza kwizikolo, kwizibhedlele, kunye nezicwangciso zoluntu.
Umyalelo unamalungu ahleliyo.
Eyilwe nguFrancis wase-Assisi malunga ne-1209, amaFranciscans aquka imiyalelo emithathu. Amahlwempu amaClares, okanye amantonga; kunye nentlawulo yesithathu yabantu. Iimvumba ziyahlukana ngakumbi kwiiNtshontsho zeNcinci kunye neFriars Minor Capuchin. Isebe leConventual linezinye ipropati (iinqonta, iicawa, izikolo), ngelixa iCapeuins ilandelelana ngokutsha nomthetho kaFrancis. Lo myalelo uquka abafundisi, abazalwana, kunye neendoda ezigqoka iingubo ezimdaka.
Eyaziwa nangokuthi i-Premonstratensians, lo myalelo wasungulwa nguNorbert ekuqaleni kwekhulu le-12 kwintshona yeYurophu. Iquka abafundisi bamaKatolika, abazalwana kunye noodade. Bathi ubuhlwempu, ukunyaniseka, nokuthobela kunye nokwahlula ixesha phakathi kokucamngca kuluntu kunye nokusebenza kwihlabathi langaphandle.
Iincwadi zeBhayibhile ezikhuthaziweyo zeSifundo seMbali
5 Izinyathelo zokwakha umtshato oqinileyo ongumKristu
Imihla yama-Orthodox yePasika
5 iindlela zokuva ilizwi likaThixo
Ukuchitha ixesha kunye noThixo
Indlela yokwabelana ngolwazi lwakho
Ukuphila Ekhululekile Ukuziphendulela
Imisebenzi Yomthandazo kubantwana
I-Lifeline ekufumaneni umsebenzi-Ukulingana koBomi
ILizwi loKhuselo lweMbali yeMbali
Iimfihlakalo zeMfazwe womthandazo nguDerek Prince
7 i-Molecules Ungeke Uphile Ngaphandle
I-Satire ye-Legendary Women's Legendary, uJyy Brady, "Ndifuna Umfazi"
UFeng Shui unyango
Ukuqokelela Iingcamango Zabantwana kuzo zonke iAgesi
I-Renaissance Architecture kunye nefuthe layo
Indlela yokudibanisa "Convertir" (ukuguqula)
USt. Francis wase-Assisi: I-Patron Saint yezilwanyana
Imivuzo yeePalamente zaseKhanada 2015-16
I-Chemistry ye-Baking Cookies
I-Anthropomorphism kunye namalungelo oluntu
I-Colossal Head of the Olmec
Phezulu i-Whitney Houston Iingoma zee-80s
I-Eastern Tent Caterpillar (i-Malacosoma americanum)
Iingxelo ezine zeeCurses ezinokuthi (okanye mhlawumbi zingabi) Zibe yiNyaniso
Ukudala kwehlabathi kwiNorse Mythology
I-Free Texas Ishicilelwe kubafundi basekhaya
Phezulu Elton John Iingoma zee-80s
Ngaba iZikolo Ezizimeleyo Ezifanele Imali?
10 I-Guitar Riffs ehamba phambili ye '90s
I-Pueblo Bonito: I-Chaco Canyon I-Great House eNew Mexico
Ukulingisa (UkuHlola kunye nokuBumba)